Al-Shabaab oo weeraray Saldhig ku yaal Gobolka Jubbada Hoose & dagaal ka dhacay | Banaadir Times
HomeUncategorisedAl-Shabaab oo weeraray Saldhig ku yaal Gobolka Jubbada Hoose & dagaal ka...
Al-Shabaab oo weeraray Saldhig ku yaal Gobolka Jubbada Hoose & dagaal ka dhacay
Xubno ka tirsan Ururka Al-Shabaab ayaa waxaa la sheegay inay weerar ku qaadeen Saldhiga degaanka Baar-Sanguuni ee Gobolka Jubbada Hoose, halkaas oo ay ku sugan yihiin Ciidamada dowladda Soomaaliya & kuwa Daraawiishta Jubbaland.
Dagaal kooban oo geystay khasaaro kala duwan ayaa degaan ka Baar-sanguuni ka dhacay, waxaana dadka degaanka qaarkood ay sheegeen inay maqlayeen dhawaqa rasaasta ay isku adeegsanayeen labada dhinac.
Saraakiil ka tirsan Ciidamada Millateriga ee ka howlgalla degaannada Jubbaland ayaa sheegay inay iska difaaceen weerarkii kaga yimid dhinaca Ururka Al-Shabaab, isla markaana khasaaro ay ku gaarsiiyeen dagaalkii ay la galeen.
Wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya degaanka Baar-Sanguuni ee Gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in xaalada ay tahay mid degan marka laga reebo dhaq dhaqaaqyo iyo howlgallo ay wadaan Ciidamada dowladda Soomaaliya & kuwa Daraawiishta Jubbaland.
Previous articleFarmaajo oo la kulmay qaar kamid ah Madaxda dowlad Goboleedyada
Next articleCiidamada dowladda Soomaaliya oo howlgal qorsheysan fuliyay